Ku noolashada itaaldarrada | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Ku noolashada itaaldarrada
Qof naafo ah waa qof qabo cudur ama dhaawac keenaayo in uu baahan yahay taageero dheeraad ah.
Haddii aad jirato ama aad tahay qof naafo ah
Haddii aad jirato marka aad shaqeeyneeyso waxuu shaqo dhiibahaada bixinaa mushaar jiro mudo 14 bari ah. Waxii ka danbeeyo waxaad lacagta ka heleeysaa Hey'adda sanduuqa ceeymiska. Waxa lagu magacaabaa lacagta jirada.
Haddii aadan waqti buuxo cudur awgiis uu shaqeeyn karin ama haddii aad qof naafo ah tahay waxaad lacag ka heli kartaa Hey'adda qasnada ceeymiska.
In aad la xariiro hey'adda qasnada ceeymiska
Hey'adda qasnada ceeymika waxeey lee dahay xafiis aad aadi karto haddii aad qabto su'aal. Marmarka qaarkood waa in aad waqti ka balansataa.
Waxaad warbixin dheeraad ah ka heleeysaa bogga: www.forsakringskassan.se.
Haddii aad go'aanka Hey'adda sanduuqa ceeymiska uu aragto in uu qaldan yahay waad ka dacwoo kartaa. Ka dacwooshada waa in qofka uu soo qortaa, waana in uu sameeyaa mudo labo bilood gudaheed ah laga bilabaa marka go'aanka la gaaray. Waxaad ka dacwooshada uu direeysaa maxkamada maamulka laakin marka hore baqshada waxaad uu dirtaa Hey'adda qasnada ceeymiska. Sababtuna waxeey tahay si Hey'adda qasnada ceeymiska uu hesho fursad ee ku badasho go'aankeeda. Haddii Hey'adda qasnada ceeymiska ee san badalin go'ankeeda, waxeey ka dacwooshadaada uu gudbineeysaa maxkamada maamulka.
Taageerada dhaqaale waa qeyb ka mid ceymiska adeegga bulshada kuwaasoo eey degmooyinka mas'uul ka yihiin. Waxaad taageeradaas dhaqaale ka dalban kartaa xafiiska adeegga bulshada ee degmadaada waa haddii aad isaga filneyn masruufkaada.
Warbixin dheeraad ah oo arrintaan ku saabsan waxaad ka heleysaa qeybta "Sidaan ayey degmadaadu u shaqeysaa" waxeyna qeyb ka tahay cutubka 2.